एमबिबिएस सम्भाव्यता अध्ययन टोली जुम्लामा – Nepali Health
२०७५ पुष १ गते १३:०५ मा प्रकाशित
जुम्ला, १ पुस । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल टोली कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा आएको छ ।
प्राध्यापक डा गोविन्द केसीले उक्त पढाइ सञ्चालन माग गर्दै जुम्लामै अनशन बसेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वीर अस्पतालका प्रा डा श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको टोली शनिबार जुम्ला आएको हो ।
टोलीमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका केदारप्रसाद आचार्य, शिक्षा मन्त्रालयका विष्णुप्रसाद मिश्र र कर्णाली प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्ले रहेका छन् । एमबिबिएस अध्ययन शुरु गर्दा आइपर्ने समस्या, चुनौती र सम्भावना अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाउने कार्यदलको योजना रहेको छ ।
टोलीले अस्पतालको गहनरूपमा निरीक्षण गरेको छ । टोली दुई दिन जुम्लामा बस्ने योजना रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले खोजेका सबै पक्षलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलका संयोजक प्रा डा गिरीले बताए । कार्यदलले प्रतिनिधिसभाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतसहित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय प्रशासन तथा प्रतिष्ठानसँग बैठक बसी गहनरूपमा छलफल गरेको छ ।
नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले प्रतिष्ठानको ऐनमा पनि कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा एमबिबिएस अध्ययनका लागि व्यवस्था गरेको बताए । उनले भने, “कर्णाली प्रदेशको जुम्ला १० जिल्लाको केन्द्र पनि हो र अन्तर जिल्ला सडक संजालले जोडिएकोले विरामी आउन जान सहज भएकोले पनि यहाँ एमबिबिएस कार्यक्रम संचालन गर्न उपयुक्त छ ।”
प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईंका अनुसार टोलीले यहाँ एमबिबिएस पढाइका लागि प्राध्यापक भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । उनले भने, “त्यस्तै आवश्यक पूर्वाधार तयारीमा जुटेका छौँ । आधारभूत विज्ञान प्रयोगशाला तथा पाठ्यक्रम तयार पार्ने काम पनि भइरहेको छ ।”
जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, अछाम, जाजरकोट, बझाङ र बाजुरामा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले २०६८ सालमा जुम्लामा यो प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो । प्रतिष्ठानले नर्सिङका प्रमाणपत्र र स्नातक तह, स्नातक तहको मिडवाइ फ्रि तथा स्वास्थ्य र बेहोस पार्ने ९ऐनेस्थेसिया० सहायक तर्फका पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा स्नातक तहको जनस्वास्थ्य विषयमा अध्यापन सुरु गराउन प्रवेश परीक्षा लिइसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । रासस
अस्पतालमा भएको मृत्यु स्वभाविक कि अस्वभाविक ? काउन्सिलको छानबिन अब संयुक्त रुपमा
कोरोना भाइरसका कारण ‘बिरामी सुरक्षा’सम्वन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन स्थगित
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी सहित चार सदस्यमाथि मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण
ट्रमा सेन्टरमा अब विपन्नलाई शल्यक्रियाजन्य सामग्री नि:शुल्क !
एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रमा डा. रमेश खरेल, तालिम केन्द्रमा डा. घिमिरे
कान्ति अस्पतालको निर्देशकमा डा. कृष्ण पौडेल, ट्रमामा डा. सन्तोष, सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. पाण्डे इडीसीडीमा
जाडो मौसममा देखिने स्वास्थ्य समस्या र समाधानका उपाय
तीन साता लामो उपचार पछि निर्मलाका बाबु यज्ञराज टिचिङबाट डिस्चार्ज